January 26, 2021 Xuseen 2
Puntlandtimes (Dhuusamareeb)-Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ka horyimid dalab ku aadan muranka doorashada Soomaaliya oo ay u soo gudbiyeen madaxweyanayaasha Puntland iyo Jubbaland.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa ka horyimid go’aan ku aadan waxka bedelka qodobada doorashada ee muranka dhaliyey oo ay isla garyteen madaxda labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland & wakiilada beesha caalamka, waxaana uu sheegay inaysan sax ahayn labada maamul marwalba sida ay rabaan loo yeelo.
Xogta ay warbaahintu heshay ayaa sheegay in wada hadalka khadka taleefonka ah oo ay yeesheen xubnaha beesha Caalamka iyo maamulada Puntland iyo Jubaland loogu ogolaaday labadaas maamul in wax laga badalo qodobada lagu muransan yahay ee doorashooyinka dalka.
Madaxweyne Qoorqoor oo ka agdhaw Villa Somalia xiriir wanaagsanna la leh madaxda ugu sarraysa dowladda Soomaaliya ayaa doonaya in shir guud la isugu yimaado marka hore, si dhammaan looga wada-hadlayo arrimaha taagan, balse aysan xal aheyn in dhinacyo gaar ah la qanciyo.
Madaxda labada maamul ayaa dhankooda ka horyimid dedaaladii Qoorqoor ee dhex dhexaadinta kadib markii uu ka garab hadlay Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ku dhawaaqay inaan cidna loo joojin doonaan ayna xukuumadda Soomaaliya hirgelin doonto doorashada Soomaaliya ee 2021.
Doorashada ayaa laga hadlayaa ee maxaa keenay masawirkaan mesha, mise kuxumeyn PL/JL baa halkaas ku grusat?
Khalif Koogi says:
Masawirku waa khaldan yahay. Yaa hadda u ah Madaxweyne Hirshabelle? Mohamed Abdi Ware maxaad u keenteen sawirkiisa? ma sidaas baad war ku gal tihiin?